ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ဦးဆောင်မှုအား ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ဥပဒေစိုးမိုးရေး အခြေခံများမှ ဝေဖန်သုံးသပ်ခြင်း - အပိုင်း (၃)
စာရေးသူ၏ ဆောင်းပါးများကို ဖတ်ပြီးနောက် စာဖတ်သူ ဖိုးကြီး ဆိုသူတဦးက “ အရင်က ခင်ညွန့်တို့ သန်းရွှေတို့အကြောင်းကို လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာတောင် ခပ်ကျယ်ကျယ် မဝေဖန်ရဲတဲ့ခေတ်၊ အခုက NLD အာဏာရလို့ အစိုးရဖွဲ့နိုင်ခဲ့ရင် ဒေါ်စု နဲ့ NLD ကို ဝေဖန်တဲ့စကားမျိုး ခပ်ကျယ်ကျယ် မဟရဲ မဆိုရဲ တဲ့ခေတ်များ ရောက်လာလေမလား မသိဘူး။ မကြိုက်လဲ မတတ်နိုင်ဘူး မသင့်တာတွေ့တော့ ပြောရမှာပဲ အခုလဲ ပြောမယ် နောင်လဲပြောမယ်။” ဟု မှတ်ချက် ပြု ခဲ့သည်။ စာရေးသူသည် အဆိုပါ စာဖတ်သူနှင့် သဘောချင်းတူပါသည်။
ဝေဘန်ရေးသည် ဒီမိုကရေစီ၏ အသက်သွေးကြောဖြစ်သလို လူပုဂ္ဂိုလ်တဦး၏ လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖေါ်ပြောဆိုခွင့်လည်း ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံရေးပါတီ တရပ်တွင် ပါတီတွင်း ဝေဘန်ရေး ရှိမှ ကောင်းစွာရှင်သန်ပါမည်။ လူ့အဖွဲ့အစည်း၌ လူထုအတွင်း လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖေါ်ပြောဆိုခွင့်ရှိမှ တိုးတက်ပါမည်။ ဤအခြေခံမှ ဆက်လက်ဝေဘန်သွားပါမည်။
ဥပဒေစိုးမိုးရေးကို တည်ဆောက်မပေးနိုင်သည့် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ
၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံကို ဖြစ်နိုင်လျှင် လုံးဝဖျက်သိမ်းပစ်သင့်သည်။ အနည်းဆုံးအားဖြင့် ယင်း၏ အခြေခံကြောရိုး များအား ပြင်ကိုပြင်ရပါမည်။ ဤသည်မှာ တိုင်းပြည်အကျိုး အတွက် လျှောက်ရမည့် လမ်းကြောင်းပင်။ ယင်းလမ်း ကြောင်းကို အထောက်အပံ့ဖြစ်စေရန်မှာ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားမှုများနှင့် စပ်လျှဉ်း၍ လူထု၏ အခန်း ကဏ္ဍကို တိုးမြင့်စေခြင်းဖြစ်သည်။
“ယခုလောလောဆယ် ပြင်ဖို့ကြိုးစားရင် အန်အယ်လ်ဒီ အမတ်နေရာ လေးဆယ်ကျော်လောက်နဲ့ ဘယ်လိုလုပ် ဖြစ်နိုင်မလဲဟု စောဒကတက်သူများ ရှိကောင်းရှိပါမည်။ လက်တွေ့မဖြစ်နိုင်ဘူး ထင်ရင် ဘာကြောင့် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲဝင်ခဲ့သလဲဟု ပြန်မေးရပါမည်။ လူထုကို ကတိပေးထားသည်မှာ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲပြီးမှသာ ပြင်ဖို့ကြိုးစားရန်မဟုတ်၊ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ သက်တမ်းအတွင်းမှာပင် ပြင်ရန်ဟု စာရေးသူ နားလည်သည်။ လွှတ်တော်အတွင်း၌ ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ရန် ကြိုးစားစရာရှိတာ အမြန်ဆုံး ကြိုးစားသင့်ပါသည်။ လူထုကြီးကလည်း လွှတ်တော်ပြင်ပမှာ လှုပ်ရှားတောင်းဆိုမှုများရှိလာမှာ မုချဖြစ်သည်။ နိုင်ငံတကာဖိအားများလည်း ကျရောက်လာနိုင်သည်။”
ဥပဒေစိုးမိုးရေး၊ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး၊ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေး တို့ကိုကြွေးကြော်လျှက် လူထုထံမှ ဆန္ဒမဲ များရယူခဲ့သော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ယင်းတို့နှင့် စပ်လျှဉ်း၍ အခြေခံလူထုများအကြားတွင် ဆွေးနွေးပွဲများ၊ သင်တန်းများ၊ ပညာပေးရေးများ၊ လူထု၏သဘောထားအမြင် စုဆောင်းရေးလုပ်ငန်းများကို အားကောင်းကောင်း ဖေါ်ဆောင်လိမ့်မည်ဟု မြှော်လင့်ခဲ့သည်။ နိုင်ငံရေး အာဏာမရသေး၊ အစိုးရ မဖြစ်သေးသော်လည်း လူထုခေါင်းဆောင် အနေဖြင့် လုပ်လိုစိတ်ထက်သန်ပါက လုံးဝ လုပ်၍ ရနိုင်သော လုပ်ငန်းဖြစ်သည်။ သိုရာတွင် ယနေ့အချိန်အထိ ဟုတ္တိ ပတ္တိ မတွေ့ရပါ။
ယခုမှု ယင်းတို့အစား ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ၀န်းကျင်တွင် ကပွဲများ၊ သီဆိုပွဲများ၊ ဟိုပွဲသည်ပွဲများ၊ ခရိုနီများနှင့် တွေ့ဆုံပွဲများ၊ စစ်အာဏာရှင် စနစ်ကို ပြုပြင်ဖာထေးရေးလုပ်ငန်း များ နှင့်သာ ပြည့်နှက်နေပါတော့သည်။ ပညာရေး ရံပုံငွေ သိန်းနှစ်ထောင်ကျော်ရှာ နိုင်သည့် အပေါ်တွင် ဂုဏ်ယူနေသည်။ အင်န်ဂျီအိုနှင့် လူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့များ လုပ် ရမည့် အလုပ်တွင် နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်က ၀င်ရောက် အလုပ်များနေသည်။ အစိုးရ၏ ကချင်ပြည် နယ်ထိုးစစ်၌ လူထု ပညာရေးအတွက် သုံးရမည့်ငွေများ အလဟသ ဖြစ်နေသည်ကို နိုင်ငံရေးအရ မလေ့လာအား။ ဒီဇင်္ဘာ ၁၄ တရက်တည်းနှင့် ကျပ်ငွေ သိန်းတသောင်းကျော်ခန့် ကုန်ကျနေသည်ကို ဂရုမပြုအား။ ယနေ့အထိ မြန်မာ့တပ်မတော်က ခေါင်းမာမာနှင့် ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်နေသည့် အတွက် အနည်းဆုံး ကျပ်ငွေ သိန်းပေါင်း သုံး သောင်း ကျော်ခန့်မျှ ကုန်ကျသွားသည်ကို ဥပဒေစိုးမိုးရေးရှုဒေါင့်မှ ချဉ်းကပ် တားဆီးရန် မကြိုးစား။
ကချင်ပြည်နယ် နှင့် ရှမ်းပြည်နယ်သည် နယ်ချင်း ဆက်နေသည်။ ၀ နယ်မှာ ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းမှာ ရှိသည်။ ၀ နယ်တွင် ၀ ပြည်သွေးစည်း ညီညွတ်ရေးပါတီ (၀သပ) ဦးဆောင်လျှက် ၀ လက်နက်ကိုင်တပ် သောင်းဂဏန်းတချို့ မျှ အင်အားနှင့် ရပ်တည်လျှက်ရှိသည်။ နယ်ခြားစောင့်တပ်ဖွဲ့စည်းရေးကို ကေအိုင်အို ရော ၀သပ ကပါ လက်မခံပါ။ လက်မခံတာချင်းအတူတူ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရက ကေအိုင်အိုကို အပြတ်တိုက်လျှက်ရှိ သည်။ ၀သပ နှင့် တော့ ရွှေလမ်း၊ ငွေလမ်း ဖေါက်လျှက် ရှိသည်။ ၀သပ ကို တိုက်စေခြင်၍ ပြောနေခြင်း မဟုတ်။ ဥပဒေ စိုးမိုးရေးအခြေခံနှင့်ဆန့်ကျင်နေ သဖြင့် ထောက်ပြခြင်း ဖြစ်သည်။
နယ်ခြားစောင့်တပ် မဖွဲ့သည့်အတွက် အရေးယူမည်ဆိုလျှင် နယ်ခြားစောင့်တပ်မဖွဲ့ဘဲ ရပ်တည်နေကြသည့် လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများအားလုံးကို တပြေးညီ အရေးယူရပါမည်။ ကွက်ကြားမိုးရွာ၍မရပါ။ အစိုးရက ဤသို့ ကွက်ကြားမိုး ရွာနေသမျှ ဥပဒေစိုးမိုးရေး မည်သည့်အခါတွင်မျှ ရမည် မဟုတ်ပါ။
ဥပဒေစိုးမိုးရေး အလံထောင်လျှက် လူထုထံမှ ဆန္ဒမဲ ရယူခဲ့သော ဒေါ် အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ဤသည်ကို ထောက်ပြရန်တာဝန်ရှိသည်။ ယင်းအပေါ်အခြေခံ၍ အစိုးရက ကချင်ပြည်နယ်တွင် ထိုးစစ် အရှိန်မြှင့်ဆင်နွှဲနေသည်ကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ကန့်ကွက်ရန် တာဝန်ရှိသည်။ အဘယ်ကြောင့် ငြိမ်သက်နေပါသနည်း။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင် ဤကိစ္စကို သတိမထားမိ၍တော့ မဟုတ်နိုင်ပါ။ ဥပဒေစိုးမိုးရေးအခြေခံမှ ကြည့်လျှင် ရှင်းနေသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ သတိထားမိပါလျှက် အကြောင်းတခုခုကြောင့် တမင်မျက်ကွယ်ပြုထားသည်ဆိုလျှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုယ်တိုင် ဥပဒေစိုးမိုးရေးကို နုတ်ကပြောနေသော်လည်း လက်တွေ့အရ လိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းမရှိဟု ဝေဘန်ရပါမည်။
၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံသည် တိုင်းရင်းသားတပ်များ၏ တည်ရှိမှုပြသနာကို မရှင်းနိုင်။ ဤအတိုင်း ဆက်သွားနေသမျှ ကာလပတ်လုံး တိုင်းရင်းသားတပ်များသည် မတူကွဲပြားစွာ ဆက်လက် ရပ်တည်နေကြမည်ဖြစ်သဖြင့် ဥပဒေစိုးမိုးေ၇းပျက်နေပြီး တပြည်လုံးတွင် ဖြစ်ခြင်သလိုဖြစ်နေကြမည်။ ဥပဒေစိုးမိုးေ၇းအခြေခံတွင် ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက်လိုပါက ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသစ်တခုကို မွေးထုတ်ဘို့ လိုပါမည်။
ဥပဒေစိုးမိုးရေးကို ၂၀၀၈ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် ဆက်စပ်ပြီး ထပ်မံတင်ပြပါမည်။ ပုဒ်မ ၃၃၈ တွင် “နိုင်ငံအတွင်းရှိ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအားလုံးသည် တပ်မတော်၏ ကွပ်ကဲမှုအောက်တွင် ရှိရမည်” ဟု ပြဌာန်းထားသည်။ ဖွဲ့စည်းပုံအတိုင်း အကောင်အထည်ကျင့်သုံးနိုင်ရန် တိုင်းရင်းသားတပ်များ နယ်ခြားစောင့်တပ်ဖွဲ့စည်းရေးမူကို နအဖ အစိုးရလက်ထက်ကထဲက ကြိုတင်ကြိုးပမ်းခဲ့သည်။ အဖွဲ့ငယ်ကလေးတချို့မှ လွဲ၍ ကချင်၊ ၀၊ ရှမ်း၊ မွန်၊ ကရင်၊ ကရင်နီ စသည့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းကြီးများက လက်မခံကြပါ။
ကရင်ပြည်နယ်တွင် ဒီကေဘီအေ၏ အစိပ်အပိုင်းတခုက လက်ခံသွားပြီး ကျန်တခုက လက်မခံပါ။ ကေအင်ယူမှ ခွဲထွက်ခဲ့ပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးယူသွားခဲ့သည့် ဗိုလ်ချုပ်ထိန်မောင် ဦးဆောင်သည့် အဖွဲ့ငယ်သည်ပင်လျှင် လုံးဝလက်မခံ။ ချော့မော့ ဖိအားပေးသော်လည်း မည်သို့မျှ မရသဖြင့် ဤအတိုင်း ရပ်တည်ခွင့်ပေးထားရသည်။ ဤသည်မှာ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို လက်တွေ့ကျင့်သုံး၍ မရကြောင်း ထင်ရှားသည့် သာဓကပင်။ ဥပဒေစိုးမိုးရေးကို ဆီမန်း မန်းသလို ရွတ်နေသော သူရဦးရွှေမန်း ခေါင်းဆောင်သည့် အတုအယောင် လွှတ်တော်ကြီးတခုလုံးသည်လည်း ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ နှင့်ဆန့်ကျင်လျှက် ထင်ထင်ရှားရှား ရပ်တည်နေသည့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများ၏ ပြသနာကို မည်သည့်အခါကမျှ ဆွေးနွေးခဲ့ခြင်းမရှိ။ မသိခြင်ယောင် ဆောင်ထားကြသည်။
နယ်ခြားစောင့်တပ်များအဖြစ် အတင်းအကြပ် ဆက်ဖွဲ့ခိုင်းလျှင် ခုခံကြပြီး လက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲများ တပြည်လုံး ပြန်လည်ဖြစ်ပွားလာဦးမည်မှာ ရာနုန်းပြည့်သေချာသည်။ တိုင်းရင်းသားတပ်များက ပြည်ထောင်စုတပ်မတော်တရပ် ဖွဲ့ စည်းရေးကို တောင်းဆိုနေကြသည်။ ယင်းကို လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖေါ်မည်ဆိုလျှင်၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသည် ကြီးမားသော အကန့်အသတ်ဖြစ်နေသည်။ ဖွဲ့စည်းပုံကို ဤအတိုင်း ဆက်လက်ထားရှိသမျှ ကာလပတ်လုံး မည်သည့်အခါတွင်မျှ ဥပဒေစိုးမိုးရေး မရနိုင်တော့။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဖွဲ့စည်းပုံပြဌာန်းချက်က တခြား၊ လက်တွေ့ စစ်တပ်အသီးသီး ရပ်တည်နေသည်က တလွဲ ဖြစ်နေသောကြောင့်ပင်။
နယ်ခြားစောင့်တပ်မဖွဲ့သည့်အတွက် အစိုးရက အပြစ်ရှာတိုက်ခိုက်ရာတွင် ခံရသူမှာ ကေအိုင်အို တဖွဲ့တည်း ဖြစ်နေသည်။ သို့ရာတွင် ကေအိုင်အိုကို အမြတ်ပြတ်ချေမှုန်းနိုင်ရန် ဝေးစွ၊ လိုင်ဇာဌာနချုပ်အနီး လဂျားယန်ဒေသရှိ တောင်ကုန်းတကုန်းမျှကို သိမ်းရန်ပင် လက်နက်ကြီးပေါင်းများစွာနှင့် တိုက်လေယာဉ်များပါ သုံးခဲ့ရသည်။ တပြည်လုံးရှိ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများအားလုံး နယ်ခြားစောင့်တပ်များ ဖွဲ့ကြ၊ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် အညီ မြန်မာ့တပ်မတော်၏ ကွပ်ကဲမှုအောက်ကို ၀င်ကြ၊ မ၀င်လျှင် အပြတ်တိုက်ပြီး အကုန်လုံးကို ခြေမှုန်းပစ်မည်ဟူသောမူကို မည်သည့်နှင့်မျှ ကျင့်သုံး၍ မရသည်မှာ ရာနုန်းပြည့် သေချာသည်။ မည်သူငြင်းနိုင်အံ့နည်း။ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသည် လည်ပတ်၍ မရတော့။ ဤသည်မှာ အကြီးမားဆုံးသော ဥပဒေစိုးမိုးရေး ပြသနာကြီး ဖြစ်လာသည်။
ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးရရန် လက်ရှိမြန်မာ့တပ်မတော်အား တိုင်းရင်းသား တပ်များပါ ပါဝင်ဖွဲ့စည်းမည့် ပြည်ထောင်စုတပ်မတော်တရပ်အဖြစ် ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းရန်ဟူသော အဆိုပြုချက်ကို အဓိက လေ့လာစဉ်းစားဘို့ ရှိလာသည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေဖြင့် သည်ထက်ကောင်းမွန်သည့် နည်းနာရှာဖွေနိုင်ပါက တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းများကိုရော တပြည်လုံးလူထုကိုပါ ချပြသင့်သည်။ အားလုံးလေ့လာလိုကြပါမည်။
၁၉၉၄ ခုနှစ်တွင် နအဖ နှင့် ကေအိုင်အို အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးလုပ်ရာ၌ ထဲထဲဝင်ဝင်ပါခဲ့သူ ထောက်လှန်းရေးဗိုလ်မှုးဟောင်း အောင်လင်းထွဋ်က “စာချုပ်ထဲမှာ မပါတဲ့ နယ်ခြားစောင့်တပ်လုပ်ရမယ့် ကိစ္စအပေါ် မူတည်ပြီး ကေအိုင်အေ နယ်ခြားစောင့်တပ် မလုပ်ရကောင်းလား ဆိုပြီး ကေအိုင်အိုကို ရန်မူလာတဲ့ အနေအထားရှိတယ်။ စာချုပ်ကိုလဲ ဗမာ အစိုးရဘက်က စပြီး ချိုးဖေါက်ခဲ့တာပါ။” ဟု ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဇန်န၀ါရီလ ၃ ရက်နေ့တွင် ဘီဘီစီအင်တာဗျူးတွင် ပြောခဲ့သည်။ ဤလင့်ခ်တွင် နားဆင်ပါ။
၄င်းက ဆက်လက်၍ “နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးဘို့ အစိုးရရဲ့ထိုးစစ်တွေရပ်ပြီး ၁၉၉၄ ခုနှစ်က သဘောတူခဲ့တဲ့ မျဉ်းကြောင်းကို ပြန်ဆုတ်သွားဘို့ လိုပါတယ်။ အစိုးရအနေနဲ့ထိုးစစ်ရပ်ပြီး ဗိုလ်နေမြဲ၊ ကျားနေမြဲ မူလလမ်းကြောင်းအတိုင်း ပြန်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ ကေအိုင်အေအနေနဲ့ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး မလုပ်စရာ အကြောင်းမရှိဘူးလို့ သိရပါတယ်။” ဟု ပြောသွားခဲ့သည်။ ဤမှတ်ချက်နှင့် ပတ်သက်၍မူ စာရေးသူအနေဖြင့် သိတ်ပြီး မသေချာလှပါ။
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော ၁၇ နှစ်အပစ်ရပ်ခဲ့သော်လည်း ကချင်ပြည်နယ်လူထုအတွက် မည်သည့်နိုင်ငံရေး အခွင့်အရေးမျှ မရခဲ့ကြောင်း ကေအိုင်အိုက အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ထောက်ပြခဲ့ပြီ။ ယခုလည်း အနည်းဆုံးအားဖြင့် ကချင်ပြည်နယ်လူထုအတွက်ပင် မည်သည့် နိုင်ငံရေးအခွင့်အရေးမျှ အာမခံချက်မရှိ၊ အစိုးရစစ်တပ်က အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးစာချုပ်ကို ချိုးဖေါက၊် ၄င်းတို့ထင်သလို စိတ်တိုင်းကျ ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့သည့် ကာလအတွင်း သိန်းချီသည့် ကချင်လူထုများ ဒုက္ခမျိုးစုံ ရောက်ခဲ့ကြ၊ အတော်များများလည်း ဖိနှိပ်ရက်စက်မှုများ ခံခဲ့ရ၊ အိုးအိမ်များ ဆုံးရှုံး ဘ၀များ ပျက်ခဲ့ကြ သည်တို့ကိုလည်း မည်သို့မျှ ပြန်လည်ကုစားပေးခြင်းမရှိ၊ အစိုးရတပ်က ၁၉၉၄ မျဉ်းကြောင်းအတိုင်း နောက်ပြန်ဆုတ်ပေးရုံနှင့် ပြီးပြီလား။ ယင်းမှာ တရားမျှတသည့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးဟု ပြောနိုင်ပါမည်လား။
အပစ်အခတ် ရပ်လိုက်ပြန်ပြီးနောက်တွင် ကချင်ပြည်နယ်မြေယာများအပေါ် ဦးသိန်းစိန်အစိုးရက ၄င်းတို့ အလိုကျ ပြန်လည် စီမံခန့်ခွဲတော့မည်။ ကျောက်စိမ်းများ အပါအ၀င် ကချင်ပြည်နယ်လူထုပိုင် သဘာဝသယံဇာတများအား ပြန်လည်ထုတ်လုပ်ရောင်းချ အမြတ်ထုတ်ဦးတော့မည်။ ဤသည်တို့ကို ကေအိုင်အိုဘက်က သည်အတိုင်း လက်ပိုက်ထိုင်ကြည့်နေရမည်လား။ အသေအကျေ ခုခံတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ပြီးနောက် ကေအိုင်အို ရလိုက်သည့် နိုင်ငံရေးအကျိုးအမြတ်သည် လက်တွေ့ဘာမှမရှိ။ အပစ်ရပ်လိုက်ရခြင်းသက်သက်သာ ဖြစ်သည်ဆိုလျှင် လက်ခံနိုင်ပါ့မလား။ ပြန်လည် အပစ်အခတ်ရပ်ပြီးနောက်တွင် နောက်တကြိမ် ထပ်မံ ရန်စ စော်ကားခံရကာ တိုက်ပွဲပြန်ဖြစ်ဦးမည့် အန္တရယ်ကို မည်သို့ကာကွယ်မည်နည်း။ ယင်းတို့မှာ ကေအိုင်အိုအတွက် စဉ်းစားစရာများဖြစ်ပါမည်။
ဥပမာ ပြပါမည်။ လူကြီးတဦးနှင့် ကလေးတဦး ခြေနှစ်လှမ်းခန့်အကွာ မျက်နှာခြင်းဆိုင် မတ်တတ်ရပ်နေကြသည်။ မည်သည့်ဘက်ကမျှ စတင်ရန်စစော်ကားခြင်း မရှိဘဲ ကိုယ့်နေရာမှာ ကိုယ်ရပ်နေကြရန် သဘောတူထားကြသည်။ လူကြီးဘက်က စတင်ချိုးဖေါက်ပြီး ရှေ့ခြေတလှမ်းတက်ကာ ကလေး၏ ပါးကို ရိုက်လိုက်သည်။ တချက်တည်း မဟုတ် ဘယ်ပြန်ညာပြန် ဆက်ရိုက်နေသည်။ ကလေးကလည်း တတ်နိုင်သမျှ ၄င်း၏ လက်ကလေးများနှင့် ဟိုကာ သည်ကာ ခုခံကာကွယ်နေရသည်။ ဘေးလူများက အမြင်မတော်သဖြင့် ၀ိုင်းဝန်း အော်ဟစ် ဟန့်တားကြသည်။ “ကလေးကို မရိုက်ပါနဲ့၊ ရပ်ပါတော့ လူကြီးရယ် ကိုယ့်နေရာမှာ ကိုယ်ပြန်နေပါ” ဟု ၀ိုင်းဝန်းမေတ္တာရပ်ခံကြသည်။ ဘေးလူများကပါ ကလေးဘက်က ပါပြီး မိမိကို အန္တရယ်ပြုနိုင်သည်ကို ရိပ်စားမိလာသောကြောင့် လူကြီးက နောက်ခြေတလှမ်း ပြန်ဆုတ်ပေးလိုက်သည်။
လူကြီးက ကလေးအပေါ် ကျူးကျော်စော်ကားမှုအား မည်သို့မျှ အရေးမယူ။ ကလေး နစ်နာသွားမှုအတွက်လည်း ထိုက်သင့်သည့် လျော်ကြေးနှင့် မည်သည့်ကုစားမှုမျှ မပေး။ နောင်ကိုလည်း ဆက်လက် ကျူးကျော်စော်ကားခြင်း မပြုစေ၇န် မည်သည့် အာမခံချက်မျှမရှိ။ လူကြီး စိတ်မထင်တိုင်း ရှေ့ကို ခြေတလှမ်းပြန်တက်လာပြီး ရိုက်ဦးမည့် အန္တရယ်ရှိနေသည်။ ဤဥပမာတွင် လူကြီးသည် ဦးသိန်းစိန် ဦးဆောင်သည့် အစိုးရနှင့် ၄င်းအား အမိန့်ပေးနေသည့် ကာလုံဖြစ်သည်။ ကလေးသည် ကေအိုင်အို ခေါင်းဆောင်သည့် ကချင်လူထု ဖြစ်သည်။
ကချင်ပြည်နယ် ရသင့်ရထိုက်သည့် နိုင်ငံရေးအခွင့်အရေးများကို ရည်ညွှန်းလျှက် ကေအိုင်အေ စစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဂမ်ရှောင်က နောင်ကို စစ်ဆိုတာ မရှိတော့အောင် အပြီးအပိုင် တခါတည်း လုပ်လိုက်ကြရအောင်၊ ပင်လုံစိတ်ဓါတ်နဲ့ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်လိုက်ကြရအောင် ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ တောင်းဆိုတိုက်ပွဲဝင်နေသော တန်းတူရေးနှင့် ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်မှာ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်မှသာ ရနိုင်ပါမည်။ ကချင်ပြည်နယ်တွင် ကေအိုင်အိုသည် ပြည်ထောင်စုမှ ခွဲထွက်ရေး၊ သီးခြားနိုင်ငံတည်ထောင်ရေးအတွက် တိုက်နေခြင်းမဟုတ်ကြောင်း ကေအိုင်အေ၏ စစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဂမ်ရှောင် လွန်ခဲ့သည့် ရက်ပိုင်းတချို့ကမှ ပြောကြားခဲ့သည့် မိန့်ခွန်းအား ဤလင့်ခ်တွင် နားဆင်ပါ။
၄င်း၏ မိန့်ခွန်း အရ ကေအိုင်အိုသည် ကချင်ပြည်နယ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်၊ ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်များ ရရှိရေး၊ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု အဖြစ်တည်ဆောက်ရာမှာ ပါဝင်နိုင်ရေး တို့အတွက် တိုက်ပွဲဝင်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်း ရှင်းပါသည်။ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေသည် တိုင်းရင်းသားများလို လားသည့် မည်သည့် နိုင်ငံရေးအခွင့်အရေးမျှ မပါရှိပါ။
တိုင်းရင်းသားပြည်နယ်များကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်၊ ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်ရရှိရေးကို အဓိက ထားပြီး ကေအိုင်အိုက ဘာကြောင့်ပြောနေသလဲ။
မည်သည့် နိုင်ငံရေးအခွင့်အရေးမျှ အာမခံချက်မရှိသေးဘဲ ယခုတကြိမ်ထပ်မံ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး လုပ်ပါက ဦးသိန်းစိန်အစိုးရက နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲခေါင်းစဉ်အောက်တွင် ဟိုပြော သည်ပြောနှင့် အချိန်ဆွဲထားပြီး နောက်ထပ် ၁၇ နှစ် ထပ်မံ စောင့်ဆိုင်းရဦးမည့် အနေအထားကို ကေအိုင်အိုခေါင်းဆောင်များ စိုးရိမ်နေကြပုံရသည်။ သို့ဖြစ်၍ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးကို လက်မှတ်ထပ်မံထိုးရန် သိတ်ပြီး စိတ်မ၀င်စားကြ။ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရက ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေးဟူသည့် နိုင်ငံရေးပြသနာကို အရင်ရှင်းပြစေခြင်ပုံရသည်။ စစ်မှန်သည့် ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကို အမြန်ဆုံး တည်ဆောက်လိုက်စေခြင်ပုံရသည်။ အပစ်မရပ်သေးသော်လည်း ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်သည့် နိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအား ဦးသိန်းစိန်အစိုးရက စစ်စစ်မှန်မှန် ဆောင်ရွက်နေပါက ကေအိုင်အေဘက်ကမူ အစိုးရကို ထိုးစစ်ဆင်မည် မဟုတ်သည်မှာ သေချာသည်။
အစိုးရက ကေအိုင်အိုကို ထိုးစစ်များ ပြန်လည်ဆင်နွှဲလာရသည့် နောက်ထပ် အကြောင်းရင်းတခုမှာ စီးပွားရေးအကျိုးအမြတ်ကြောင့် ဖြစ်သည်။ ဤသည်ကို ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဒီဇင်္ဘာလ (၂၇) ရက်နေ့က စာေ၇းသူ တင်ဆက်ခဲ့သည့် ဆောင်းပါးတွင် အောက်ပါအတိုင်း ဖေါ်ပြခဲ့သည်။
စစ်အစိုးရဘက်မှာ တာဝန်ယူခဲ့သူ ဗိုလ်မှုးဟောင်းအောင်လင်းထွဋ်ကလည်း အလားတူ သုံးသပ်လာသည်။ “ထိုးစစ် ဆင်မှုဟာ ဗမာအစိုးရအတွက် ဘယ်လိုအကျိုးရမလဲ ” ဟုဘီဘီစီက မေးသောအခါ ၄င်းက “ဗမာအစိုးရအတွက် အကျိုးအမြတ်အများဆုံးရှိတဲ့ နေရာတွေပါ။ ကျောက်စိမ်း၊ သစ်တောနဲ့ အခြားသယံဇာတတွေ ရှိတယ်။ ရေအားလျှပ်စစ် ထုတ်နိုင်တဲ့ နေရာတွေ အများအပြားရှိတယ်။ တရုတ်နဲ့စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့တဲ့ အပေါ် အစိုးရ အနေနဲ့အကျိုးအမြတ် အများအပြား ရရှိခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့် ကေအိုင်အေဟာ အစိုးရအတွက် ခလုတ်ကန်သင်းဖြစ်တယ်လို့ မြင်ပါလိမ့်မယ်။”
ကေအိုင်အိုက ပင်လုံစာချုပ်ကို ရည်ညွှန်းလျှက် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကို အသိအမှတ်ပြုရန်နှင့် ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရန် တောင်းဆိုနေခြင်းမှာ လက်တွေ့အရ မည်သည်ကို ဆိုလိုပါသနည်း။ ကချင်ပြည်နယ်တွင် တည်ရှိနေသည့် မြေယာအပေါ်မှ နည်းမျိုးစုံနှင့် ရရှိသည့် အကျိုးအမြတ်မှန်သမျှ ပထမဆုံးအနေဖြင့် ကချင်ပြည်နယ်လူထုတွင် ခံစားခွင့်ရှိရန်၊ ဒုတိယအနေနှင့် ပြည်ထောင်စုအတွင်းရှိ အခြားပြည်နယ်များ မျှဝေခံစားခွင့်ရရေးအတွက် ခွဲဝေပေးရန်ဟူ၍ စာရေးသူ နားလည်သည်။ လက်တွေ့တွင်မူ ပြည်နယ်များမှာ ဖွတ်ကျေုာပြာစုဖြစ်လာပြီး စစ်အာဏာရှင်ဟောင်း သစ်များ အခြေစိုက်နေသည့် နေပြည်တော်ကြီးသာ တနေ့ထက်တနေ့ ကြီးမား ခန့်ထည်လာသည်။ ရွှေရောင်တပြောင်ပြောင် ဖြစ်လာသည်။
ပြည်နယ်အသီးသီး၏ အကျိုးစီးပွားနှင့် ဆန့်ကျင်လျှက် မြေယာအပေါ် ဦးသိန်းစိန် အစိုးရက ထင်သလို စီမံခန့်ခွဲ၊ ကုမ္ပဏီကြီးငယ်များအား လုပ်ငန်းလိုင်စင်များချပေး၊ ၄င်းကုမ္ပဏီများတွင် ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်း သစ်များက အစုရှယ်များ ထည့်ဝင် အကျိုးစီးပွားခံစား၊ ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်း သစ်များ တည်ထောင်ထားသည့် ဦးပိုင်ကုမ္ပဏီကလည်း မြေယာများ အပေါ်ဝင်ရောက် ဂုတ်သွေးစုပ်ကြခြင်းဖြင့် ပြည်နယ်များ၏ အခွင့်အရေးများ ကြီးမားစွာ ဆုံးရှုံးလျှက်ရှိသည်။
ကချင်ပြည်နယ် အပါအ၀င် ပြည်ထောင်စုအဖွဲ့ဝင် ပြည်နယ်များ ၆၅ နှစ်ကျော် ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည့် ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့် အခွင့်အရေးပြသနာကို ကေအိုင်အိုက တခါတည်းနှင့် အပြီး ရှင်းလိုက်ခြင်ပုံရသည်။ အလွယ်တကူနှင့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး ပြန်လည်လုပ်လိုပုံမရပါ။
ကေအိုင်အို၊ ကေအိုင်အေသည် ပင်လုံစာချုပ်အပေါ် အခြေခံသည့် နိုင်ငံရေးရည်မှန်းချက်များအတွက် တိုက်ပွဲဝင်နေသည်။ သို့ဖြစ်၍ ၄င်း၏ ခုခံစစ်သည် ကချင်ပြည်နယ်တခုတည်းအတွက် မဟုတ်၊ ပြည်ထောင်စုအဖွဲ့ဝင် ပြည်နယ်များအားလုံးအတွက် စစ်မှန်သည့် ပြည်ထောင်စုပြန်လည်တည်ဆောက်ရေး၊ အတိအကျအားဖြင့် ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေးအတွက် ဖြစ်သည်ဟု စာရေးသူနားလည်သည်။ မည်မျှအထိ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ခုခံစစ်ဆင်နွှဲနေရသည်ကို နိုင်ငံတကာကပင် စတင်အသိအမှတ်ပြုလာပြီ ဖြစ်သည်။ အောက်ပါလင့်ခ်များတွင် ရှုပါ။
ပင်လုံစာချုပ်ကို ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကိုယ်တိုင် လက်မှတ်ရေးထိုး ချုပ်ဆိုခဲ့သည်။ ပင်လုံစာချုပ်သည် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံထက် အဆတသောင်းမက ပိုမို၍ တရားဝင်ကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မငြင်းနိုင်ဟု ခံယူသည်။ လာမည့် ဖေဖေါ်ဝါရီ လ ၁၂ ရက်နေ့ဆိုလျှင် ပင်လုံစာချုပ်၏ သက်တမ်း ၆၆ နှစ် ပြည့်ပါပြီ။ ပင်လုံစာချုပ်အရ ပြည်ထောင်စုအဖွဲ့ဝင်များအား ဒီမိုကရေစီ အခွင့်အရေး နှင့် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့် အခွင့်အရေးများ အပ်နှင်းထားသည်။ သို့ရာတွင် ကချင်ပြည် နယ် အပါအ၀င် တိုင်းရင်းသား ပြည်နယ်များသည် ကိုယ့်ပြည်နယ် အစိုးရကို ကိုယ့်လူထုက ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခွင့် မရ။ ကိုယ့်ပြည်နယ်ကို ကိုယ့်ဖာသာအုပ်ချုပ်ခွင့် မရ။ ကိုယ့်မြေကို ကိုယ့်ဖာသာ စီမံခန့်ခွဲခွင့်မရ။ ၁၉၄၇ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ကထဲက တက်လာသော ပြသနာသည် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံတွင် အဆိုးဆုံး ဖြစ်လာသည်။
ပြည်ထောင်စုအဖွဲ့ဝင် တိုင်းရင်းသားပြည်နယ်များအတွက် နိုင်ငံရေးအခွင့်အရေးကို ပင်လုံစာချုပ်တွင် ဖခင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကိုယ်တိုင် လက်မှတ်ရေးထိုးချုပ်ဆို အသိအမှတ်ပြုခဲ့သည်။ သမီးဖြစ်သူ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် နိုင်ငံေ၇းအရ လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်နိုင်သည့် အနေအထားတွင်ရှိနေပါလျှက် အဘယ်ကြောင့် မျက်ကွယ်ပြုနေပါသနည်း။
ယခုလောလောဆယ် ပြင်ဘို့ကြိုးစားရင် အယ်န်အယ်လ်ဒီ အမတ်နေရာ လေးဆယ်ကျော်လောက်နဲ့ ဘယ်လိုလုပ် ဖြစ်နိုင်မလဲဟု စောဒကတက်သူများ ရှိကောင်းရှိပါမည်။ လက်တွေ့မဖြစ်နိုင်ဘူး ထင်ရင် ဘာကြောင့် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲဝင်ခဲ့သလဲဟု ပြန်မေးရပါမည်။ လူထုကို ကတိပေးထားသည်မှာ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲပြီးမှသာ ပြင်ဘို့ကြိုးစား၇န်မဟုတ်၊ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ သက်တမ်းအတွင်းမှာပင် ပြင်ရန်ဟု စာရေးသူ နားလည်သည်။ လွှတ်တော်အတွင်း၌ ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ရန် ကြိုးစားစရာရှိတာ အမြန်ဆုံး ကြိုးစားသင့်ပါသည်။ လူထုကြီးကလည်း လွှတ်တော်ပြင်ပမှာ လှုပ်ရှားတောင်းဆိုမှုများရှိလာမှာ မုချဖြစ်သည်။ နိုင်ငံတကာဖိအားများလည်း ကျရောက်လာနိုင်သည်။
မကြာသေးခင်ကပင် စာရေးသူက ပြည်တွင်းတွင် လက်ရှိ အမှုလိုက်ပါဆောင်ရွက်နေသော လူငယ်ရှေ့နေတချို့အား ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေနှင့် စပ်လျှဉ်း၍ သင်တန်းပို့ချခဲ့သည်။ သင်တန်းသား ရှေ့နေတဦးက မေးသည်။ “ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုခရီးစဉ် အတွင်းမှာ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံကို ပြင်ဘို့လိုတယ်လို့ပြောမသွားဘူး။ အိန္ဒိယရောက်တော့မှပြောတယ်။ အဲဒါ ဘာကြောင့်လဲ ဆရာ” ဟူ၍ဖြစ်သည်။ စာရေးသူလည်း ရုတ်တရက် ဘာဖြေရမည်မှန်းမသိခဲ့။ သို့ဖြစ်၍ ရိုးရိုးပင် “ ဆရာလဲ ဘယ်သိပါ့မလဲကွာ။ မင်းတို့ရော ဘယ်လိုထင်သလဲ။” ဟူ၍ ပြန်မေးဖြစ်ခဲ့သည်။
ဤတွင် အခြားရှေ့နေတဦးက “ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သမတ လုပ်မယ်ဆိုရင် သူ့အနေနဲ့ ကန့်ကွက်စရာမရှိဘူးလို့ ဦးသိန်းစိန်က အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုခရီးစဉ်အတွင်း ပြောသွားခဲ့တယ်။ အဲသလို ပြောပြီးတဲ့နောက်မှာမှ ဒေါ်စု က အိန္ဒိယမှာ ဖွဲ့စည်းပုံကို ပြင်ဘို့ပြောတာ။ သူမ သမတဖြစ်ဘို့အတွက် လိုအပ်တဲ့ အပိုင်းလောက်ကိုဘဲ ပြင်ပေးဘို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးတည်နေမလားလို့ ကျမတော့ စိုးရိမ်မိတယ်။” ဟု ပြန်ဖြေသွားခဲ့သည်။ အခြားရှေ့နေများကလည်း ယင်းဖြေကြားချက်ကို လက်ခံကြသည်။
ယင်းသို့သော သုံးသပ်ချက် အဘယ်ကြောင့် ထွက်ပေါ်လာပါသနည်း။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုယ်တိုင်သည်လည်းကောင်း၊ သူမ ဦးဆောင်သည့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်သည်လည်းကောင်း၊ ဖွဲ့စည်းပုံ၏ မည်သည့်အပိုင်းများကို ပြင်ဆင်သွားမည်ဟု ယနေ့အချိန်အထိ တိတိကျကျ လူထုအားရှင်းပြခြင်း မရှိသေးပါ။ ယင်းနှင့်စပ်လျှဉ်း၍ လုပ်ငန်းစဉ်တရပ် တိတိကျကျချပြီး လူထုထံမှ သဘောထား တောင်းခံခြင်းလည်း မရှိသေးပါ။ စာရေးသူအပါအ၀င် လူထုကြီးတရပ်လုံးမှာ ထီထိုးထားပြီး ပေါက်မဲစောင့်နေရသူများကဲ့သို့ဖြစ်နေသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ဖွဲ့စည်းပုံကို ပြင်ရန် မကြိုးစားတော့ဘဲ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲအထိ သည်အတိုင်း မြှောလိုက်သွားတော့မည်လား ဟူသည်ကို စိုးရိမ်ရသည့် အနေအထား ရှိလာသည်။ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း[i] မရှိသည့် ပြသနာကို စစ်အာဏာရှင် အုပ်ချုပ်မှုယန္တယားအတွင်းမှာသာမက ဒီမိုကရေစီရေးလှုပ်ရှားမှုကြီးအတွင်းမှာပါ ရင်ဆိုင်နေကြရသည်။ ရှေ့ကို မည်သို့ဆက်လက် စခန်းသွားကြတော့အံ့နည်း။
အပိုင်း (၄) ကို ဆက်လက်ဖတ်ရှုပါရန် ...
ဇန်န၀ါရီလ ၃ ရက် ၂၀၁၃ ခုနှစ်
အမေစုကိုယုံပါတယ်။ဒါပေမဲ့ လွှတ်တော်ထဲရောက်မှ အမေစု အရင်လိုမဟုတ်တော့ဘူး၊မဟုတ်တော့ပါဘူးကွယ်။
အဆင့်ရှိသောဝေဖန်ရေးကိုကြိုဆိုပါတယ်၊၊ လူပြိန်းကြိုက်ဝေ ဖန်ရေးကို မကြိုဆိုပါ၊၊
အောက်ပါ ကွန်မန့်က ဒီဆောင်းပါး အပိုင်း ၂ မှာ ကျွန်တော် ဒီဘလော့မှာပဲပေးခဲ့တဲ့ကွန်မန့်ပါ၊ ကွန်မန့်ပေးတဲ့အချိန်က အပိုင်း ၃ ကို မဖတ်ရသေးပါ၊၊ အပိုင်း ၃ ကို အခုမှဖတ်ဖူးတာပါ၊၊၊
ရှိနိုင်ပါတယ် မည်သူမဆို လွတ်လပ်စွာ ဝေဖန် နိုင်ပါတယ်၊၊ ဝေဖန်ရေးရှိမှတိုးတက်မှာ မဟုတ်ဘူးလားဗျာ၊၊"
ဒီလို ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ဝေဖန် ရေး လေကန်ရေး တွေလုပ် သင်္ကြန်အမြောက်တွေပစ် နောက်ဆုံးတော့
အမေရိကန် (သို့) အနောက်နိုင်ငံ တစ်ခုခုမှာ နိုင်ငံရေး
ခိုလှုံပြီး နိုင်ငံသား ခံလိုက်ကြရော ဒီဂွင်တွေက ရိုးနေပြီ
ဒီထက်သစ် ဒီထက်ကောင်းတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ခေါင်းဆောင်
ကြီး လိုလိုဖန်တီးပြီး အခွင့်အရေးတွေ တစ်ဆုံး လာနှိုက်
ပါအုံးလား ABSDF မြောက်ပိုင်း ကိစ္စ နောက်ကြောင်း
ယခင်ကစာဖတ်သူရောစာရေးသူရော ပြောချင်ပါသည်။”ဦးခင်ညွှန့်နဲ့ဦးသန်းရွှေခေတ်ကလို လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာ ကျယ်ကျယ်မပြောရဲသလို NLD အနိုင်ရလို့ အစိုးရဖွဲ့ခဲ့ရင် ကျယ်ကျယ်မပြောရဲ မဟရဲ ကြောက်နေရမည့်သဘောဖြစ်လာမလား”ဆိုတဲ့ဝေဖန်တာဟာ ကိုယ့်ရဲ့စိတ်နဲ့နိုင်းပြောနေတာလို့ထင်မိပါတယ်။ အဘိုးဗိုလ်ချုပ်ဦးအောင်ဆန်းရဲ့သွေးအမေစုဟာ ဘယ်တော့မှ တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအပေါ်မှာ သစ္စာဖောက်လိမ့်မယ်မဟုတ်ဆိုတာ အသွေးအသားထဲထိ ယုံကြည်ပါတယ်။အဘိုးဖြစ်ချင်ခဲ့တဲ့ဆန္ဒ၊မျော်လင့်စိတ်ကူးပုံဖော်ခဲ့တဲ့ “ရွှေနိုင်ငံရွှေခေတ်ကြီးဆီသို့” ရောက်ဖို့ အဘိုးကိုယ်စားအဘိုးခြေရာနင်း လက်ဆင့်ကမ်းထမ်းဆောင်နေတယ်လို့လည်းယုံကြည်ပါတယ်။တိုင်းပြည်နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အနာဂါတ် နောင်တစ်ချိန်မှာ တိုးတတ်သာယာလှပဖွံဖြိုးပြီးကမ္ဘာ့အလယ်မှာ ဝံ့ကြွားထည်ဝါစွာဖြင့်အခြားအခြားသောနိုင်ငံများကပင် အားကျဂုဏ်ယူပြီး အတုယူစရာနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ဖို့ အမေစုတစ်ယောက်သာ လုပ်ပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ အပြည့်အဝယုံကြည်ထားပါတယ်။ဝေဖန်တာကိုအားပေးပါတယ်။အစွန်းတော့မရောက်စေချင်ပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ အမေစုဟာ ခင်ဗျားတို့စိတ်လိုမဟုတ်လို့ပါ။မစားရတဲ့အမဲသဲနဲ့ပက်ဆိုသလိုပေါ့။ ဝေဖန်သလိုလိုနဲ့ ပုတ်ခက်ရေးသားတာမျိုးဟာ အရမ်းအောက်တန်းကျလွန်းပါတယ်။ ဆက်ရန်းးးးးးးးးးးးးးး
လူဆိုတာကိုယ် မှန်တယ်ထင်တဲ့အရာကိုယုံကြည်ခွင့်ရှိပါတယ်။ထုတ်ပြောခွင့်လည်းရှိပါတယ်။အဲဒီအဆင့်မှာကျေနပ်ပေ့ါ။ ခုဟာက ကိုယ်ယုံတဲ့အရာမှတကယ့်အမှန်တရား။မယုံသူကဥာဏ်တိမ်တယ်။ဖျက်လိုဖျက်ဆီးသမားဆိုပြီး ပြောတာကတော့ အတ္တကြီးသွားပြီပေါ့။ ယုံကြည်စရာမရှိတာက ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံဆန္ဒခံယူတာပြည်သူတွေ တစ်ခဲနက်ထောက်ခံတာ ကျုပ်တို့ကပြည်သူ့ဆန္ဒအရတက်လာတဲ့ အစိုးရလို့မဟုတ်မှန်းသိသိကြီးနဲ့ပြောရဲတဲ့ သမ္မတ ဒါပေမယ့်ပြည်သူတွေကနေသားကျနေတော့ ကောင်းရာမွန်ရာ အဆင်ပြေရာပြေကြောင်းပြည်သူတွေအတွက် လုပ်ပေးမယ်ဆို မင်းလောင်းမမျှော်ပါဘူး။ သန်းခေါင်ထက်လည်းညကနက်ခဲ့ပြီးပြီ။ဖွတ်ဖွတ်ညက်ညက်လည်းကျေခဲ့ပြီးပြီ။ဆုံးရှုံးစရာ စိတ်ဓါတ်နဲ့သိက္ခာပဲကျန်တော့တဲ့အချိန်မှာ ကျုပ်ရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေက fashion one set တွေအောက်မှာမှေးမှိန်သွားခဲ့ပြီ။ဖခင်ရဲ့အရှိန်အဝါကြောင့် ဆန့်ကျင်ဘက်တွေအပေါ် မိုက်ရိုငိးလွန်းသူ ကြမ်းကျုတ်သူစစ်အာရှင်တွေကတောင် ထောင်ထဲကို မသွင်းရဲတဲ့သူတစ်ယောက်ကို အားကိုးမိတာကလည်းအပြစ်တော့မဟုတ်ပါဘူး အခုတော့ ပြောသင့်ပြောထိုက်တာတွေပြောလို့ရလာတဲ့ အခါ ပြောရမယ့်စကားတွေကို ပြတ်ပြတ်သားသား မပြောချခဲ့တာ နိုင်ငံရေးပရိယာယ်လိုလို အမြင်ကျယ်သဘောထားကြီးသလိုလိုနဲ့ ရေငုံနှုတ်ပိတ်ပြီးနေ နေတာက အဖေ့သွေးနဲ့တခြားစီပါ။ ပြည်သူတွေအတွက်မှန်မယ်အကျိုးရှိမယ်ဆို ဘယ်သူ့မျက်နှာကိုမှမထောက် ပြတ်ပြတ်သားသားပြောရဲလုပ်ရဲ ၊အောင်ဆန်းဟာအရိုင်းသတ္တဝါ လို့နာမည်ထွက်ခဲ့တဲ့အထိ လုပ်ပြခဲ့တာ၊ပကာသနမဖက် အပိုအလုပ်တွေနဲ့အလုပ်မရှုပ်စေချင်ခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့် ဗိုလ်ချုပ်ကိုယုံတယ် လေးစားတယ်။ဒါပေမယ့် တစ်ခြားလူတွေကို စောင့်ကြည့်ရဦးမယ်။
အပြောချည်းဖြစ်နေလို့ဝေဖန်တာခံရတာပါ-အလုပ်လုပ်ရင် ဝေဖန်တာခံရပေမဲ့ နဲပါမယ်-ထောက်ခံပါ-မကြောက်ပါနဲ့ -ပြောလို့ထောက်ခံတယ်- မကြောက်မရွံ့ ပြောတယ်- ပေးဆပ်ရတာက ထောင်ဒဏ်- အဖွဲ့ ချုပ်က ထောင်ကျ အကျဉ်းသားတွေ ကြည့်ရှူတယ်ဆိုတာ-သူ့ ပါတီဝင်တွေဘဲများတာပါ- တချို့ က အဖွဲ့ ချုပ် အဖွဲ့ ဝင် မဟုတ်ပေမဲ့ အဖွဲ့ ချုပ်ကို လုံးဝယုံကြည်ပြီး ထောက်ခံအားပေး
လာတာပါ-ကိုယ်ထောက်ခံ အားပေးတဲ့ ပါတီက -အခုလို လယ်သမားအရေး-အလုပ်သမားအရေးတွေ ပေါ်ပေါက်လာပေမဲ့ ကိုယ်နဲ့ မဆိုင်သလို ပါးစပ်ပိတ်နေတာတော့ မကြိုက်ပါ- တရားဥပဒေက ဆန္ဒပြခွင့်ပြုထားတာမို့ ဆန္ဒပြတာတွေ ဥပဒေ နဲ့ မညီလို့ဝင်ရောက်မဖြေရှင်းတာပါလို့ပြောလာလျှင် ဘာမှ မပြောလိုပါ- ပြောနိုင်တာ တခုကတော့ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲမှာ အဖွဲ့ ချုပ် ရမည့် ရလာဘ်က ၁၉၉၀ခုနှစ်လောက်မရနိုင်ဘူးဆိုတာပါဘဲ-မယုံစောင့်ကြည့်ပါ-
ပြောကြတာစုံနေတာပဲ ... ရှုပ်ပါတယ်
ငါပဲ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ခေါင်းဆောင်အစစ်လုပ်လိုက်မယ်
over 10000 soldiers were already went to hell in kachin state.
sent more your USDP soldiers to go hell.
myomasit chinese Ne Win and his followers' slave.
ကျော်ထူးးးးးးးးးးးးဆိုတဲ့လူ မြန်မာဘက်ကလိုလို ကချင်ဘက်ကလိုလိုနဲ့ သွေးထိုးလှုံ့ဆော်တဲ့commentမျိုးကျေးဇူးပြုပြီးမရေးဖို့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။ဒီလိုရေးတဲ့ခင်ဗျားရဲ့commentဟာ ခင်ဗျားရဲ့အဆင့်အတန်းဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာ လူအများကိုပြလိုက်တာပါပဲ။ပြည်တွင်းမငြိမ်းချမ်းမှ ခင်ဗျားတို့ထမင်းစားခွက်မပျောက်မှာဆိုတာ နားလည်ပါတယ်။ခင်ဗျားဘယ်လောက်ပဲသွေးခွဲနေပါစေ ကချင်လည်းမြန်မာ မြန်မာလည်းကချင် အတူတူပါပဲ။ကိုယ့်ညီအကိုအချင်းချင်း ခုလိုတိုက်ခိုက်နေတာကိုလည်း အရမ်းစိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်။ဘယ်သူပဲကျဆုံးပါစေ ကိုယ့်ညီအကိုတွေကျဆုံးတာပါပဲ။အများပြည်သူတွေရင်နာစရာမျက်ရည်အပြည့်နဲ့ ညီအကိုအချင်းချင်းတိုက်ပွဲတွေအမြန်ဆုံးရပ်ဆိုင်းပါစေ။ဆွေးနွေးညှိုနိုင်းပြီး ရွှေနိုင်ငံရွှေခေတ်ကြီးဆီသို့ ဒို့ညီအကိုတွေ အတူတူလျောက်လှမ်းကြပါစို့လို့ ဆန္ဒပြုပါရစေ.....
၂၀၀၈ ဖွဲ့ စည်းပုံပြင်ဆင်ရေး အရေးကြီးပုံကို အပိုင်း (၁)နှင့် (၂)တွင် ကျွန်တော် comment ရေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ စာရေးသူအနေနှင့် အချိန်အားလျှင် ပြန်ဖက်ကြည့်စေချင်ပါသည်။ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှာ ပြသနာရှာတဲ့သူတွေ အရမ်းများနေပြီး ပြသနာဖြေရှင်းတဲ့သူတွေက အရမ်းနည်းနေမယ်ဆိုရင် ဒီနိုင်ငံရဲ့ ပြု့ ပြင်ပြောင်းလဲရေးဟာ အရမ်းနှေးကွေးနေဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လောကမှာပြသနာရှာတာ အရမ်းလွယ်ပါတယ် ဖြေရှင်းရတာခက်ပါတယ်။ ပြသနာရှာတာက လူညံ့ လူဖျင်းတွေရဲ့အလုပ်ပါ လူလိမ္မာတွေရဲ့အလုပ်မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်နဲ့ ရင်းနှီးတဲ့ general knowledge ကောင်းပြီး စကားပြောကျွမ်းကျင်တဲ့လူတစ်ယောက်က ဒေါ်စုနဲ့ ပက်သက်ပြီး ဝေဖန်မှုတွေအများကြီးလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ သူ့ ရဲ့ဝေဖန်ချက်အရဆိုရင် ဒေါ်စုဟာ လူထုခေါင်းဆောင်တစ်ယောက် အနေနဲ့ မရှိသင့်တော့ပါဘူး ဒါနဲ့ကျွန်တော်သူ့ ကို မေးခွန်းထုတ်တယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံရေးမှာ ဒေါ်စုကို ခေါင်းဆောင်နေရာက မသင့်တော်ဘူးဆိုရင် ခင်ဗျား ဘယ်သူ့ ကိုရွေးမလည်းဆိုတော့ သူ့ မှာအဖြေမရှိဘူး။ ဝေဖန်မှုမှာ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရပါမယ်။ ဘာအတွက်ဝေဖန်တာလည်း၊ဘယ်လိုအကြံညာဏ်မျိုးပေးနိုင်လို့ ဝေဖန်တာလည်း ဆိုတာပါ။ဒီမိုကရေစီတော်လှန်ရေး တစ်လျှောက်မှာ တစ်ချို့ လက်တွဲဖေါ်တွေတောင် ဘာမဟုတ်တဲ့ ထမင်းတ၀မ်းအတွက် စစ်အစိုးရနဲ့ လက်ဝါးချင်းရိုက်ပြီး ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်မှုကို သစ္စာဖောက်ပြီး ကိုယ့်ပါတီနှင့် ကိုယ်ခေါင်းဆောင်၊ကိုယ်တော်လှန်ရေး ရဲဘော်တွေကို ပြန်လည်တိုက်ခိုက်တာမျိုးရှိပါတယ်။ စာရေးသူအနေနဲ့ရိုးရိုးသားသား ဝေဖန်တာမျိုးဖြစ်ပါစေ အဲ့သလိုမျိုးမဖြစ်ပါစေနဲ့ လို့ ဆုတောင်းပါတယ်။ ၂၀၀၈ ဖွဲ့ စည်းပုံ ပြင်ဆင်ရေးဟာ အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ ဦးစားပေး ပြင်ဆင်သင့်တဲ့အချက်တစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အလွန်တစ်ရာ ခက်ခဲတဲ့စိန်ခေါ်မှုကြီးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒေါ်စုကလည်း သိပါတယ်၊NLD ကလည်းသဘောပေါက်ပါတယ်။ တကယ်လို့ များ ရခိုင်အရေး၊လက်ပန်တောင်း တောင် အရေး၊ ကချင်အရေး၊ လယ်သမားအရေး၊အလုပ်သမားအရေးတွေ မပေါ်ပေါက်ခဲ့ဘဲ ဖွဲ့ စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးတစ်ခုထဲကိုဘဲ အာရုံ စိုက်ကြမယ်ဆိုလျှင် ခရီးအတန်အသင့် ပေါက်နိုင်ပါတယ်။ ခက်တာက ဒီအရေးအခင်းတွေက အချိန်ကိုက်ပေါ်လာတယ်။ဒေါ်စုအပေါ်ဝေဖန် တိုက်ခိုက်မှုတွေကလည်း အရမ်းများလာတယ်။ ဒါဟာသွေးရိုးသားရိုးဘဲလား ကျွန်တော်တို့ စဉ်းစားစရာပါ။ အပိုင်း (၂) မှာ ကျွန်တော်ရေးခဲ့ သလိုဘဲ ဖွဲ့ စည်းပုံ ပြင်ဆင်ဖို့ အတွက် people power ကိုသုံးရမယ် people power မတည်ဆောက်နိုင်ဘဲ ပြင်လို့ မရနိုင်ဘူး။ ဖြစ်နိုင်ရင် people power ကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်ကြမလည်း ဖွဲ့ စည်းပုံကို ဘယ်လိုပြင်ရမလည်းဆိုတဲ့ အကြံအဥာဏ်မျိုးကိုဘဲ ပေးကြစေချင်တယ်။
ဟေ့ကော င်ကျော်ထူးမင်းရခိုင်ကိုလာထိနဲ့ရခိုင်ကမင်းအဖေကွကိုယ်ဖအေကိုပြန်ပြောရင်မြေမျိုလိမ့်မင်းဘယ်တိုင်းရင်းသားမှမင်ပြောစရာမလိုဘူးမင်းအဆင့်နဲ့မတန်ဘူးမင်းကတော်တော်အဆင့်မရှိတဲ့ကောင်ဘဲ ညီညီမင်းပြောတာထောက်ခံတယ်အကုံသူညီညွတ်ရမယ်
အကိုpa kyaingပေးသွားတဲ့commentကိုထောက်ခံပါတယ် သဘာဝလည်းကျလည်းကျပါတယ်။ပြီးတော့ ကိုကျော်ထူးဆိုတဲ့လူ ကိုယ့်ညီအကိုတိုင်းရင်းသားအချင်းချင်း သွေးကွဲအောင် စည်းလုံးညီညွတ်မှူပြိုကွဲအောင် သွေးထိုးမလှုံဆော်တာတွေမလုပ်ပါနဲ့။ခင်ဗျားမှာ လူ့အသိတရားရှိတယ်ဆိုရင်းးးးးးးးးးးခြင်္သေ့နဲ့ကျား တို့ရဲ့အသားကိုစားချင်လို့ ရန်တိုက်ပေးတဲ့ မြေခွေးလိုဖြစ်နေပါပြီခင်ဗျားက။ပြီးတော့ ခွေးရူးတစ်ကောင်လို အားလုံးကို ပက်ရန်းပြောသွားသေးတယ်။ခင်ဗျားကိုယ်ခင်ဗျား ဘယ်အဆင့်ရောက်နေပြီဆိုတာ ခင်ဗျားအသိဆုံးပါ။တော်တော်လေး အောက်တန်းကျတဲ့စကားတွေပြောသွားတာပဲ။ခင်ဗျားလိုလူတွေရှိနေသမျတော့ နိုင်ငံအတွက် အများကြီးအကျိုးယုတ်စေပါတယ်။ကျွန်တော့်စကားတွေရိုင်းစိုင်းသွားတဲ့အတွက် တစ်ခြားcommentပေးတဲံသူငယ်ချင်းတွေအားလုံးကိုတောင်းပန်ပါတယ်။
လုံးဝထောက်ခံတယ်- ဒါပဲ၊ ဒေါ်စု ဘာတွေကို စုနေတာလဲ- မလုပ်နိုင်ရင်၊ မလုပ်တတ်ရင် အင်ဂျီအနုမှာဝငက်လုပ် နိုင်ငံရေးမလုပ်နဲ့ ဒါပဲ။
NLD နောက်လိုက်တွေလဲ ဆဲရင် လဲသေလိုက်၊ အကြောင်းပြောလည်း ထောက်မခံ၊ အဆိုးပြောလည်းထောက်မခံ၊ စစ်အစိုးရသားပေါက်တေါ။
Saung laypyay & Ko Pa kyaing တို့ရဲ့ COMMENTS များကိုထောက်ခံပါတယ်။
သွေးထက် အောင် မှန် တယ်ဗျ
စူးရှ လေးနက်တဲ့ အ တွေးပါပဲ။
ရခိုင် အ ရေးမှာ ကတဲက ပြတ်သားခိုင် မာ တဲ့ ရပ်တည်ချက် စကားမျိုး မထွက်ခဲ့ဘူး။ သူသေချာ မသိဘူး မ ပြော ချင် ဘူးဆိုတဲ့ စကားတွေနဲ့ ရှောင် တယ် ။
ပြီးတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်ဖာတယ်။ သူ့စကားတခွန်းကြောင့် ပြဿနာတွေ ပိုကြီးမှာ စိုးလို့တဲ့။
အမှန် ဘက် က အမုန်းခံသင့် ခံ ပြီး ရပ်တည် ရ မယ်။
ပြည်သူတွေက ငတုံးတွေ မဟုတ်တော့ဘူး
အခုရော သူလုပ် နေတဲ့ ရန်ပုံငွေ ပွဲတွေ ပွဲလမ်း သဘင် တွေထက် အ ရေးကြီးတဲ့ လုပ်လို့ ရတာ တွေ တာတွေ
အချိန်က စကားပြော တော့ မှာပါ ။
ပြည်သူတွေလဲ ဘယ်သူ့ ကိုမှ မျက်စိမှိတ် ကိုးကွယ် လို့ မရ ဘူး ဆိုတာ သိလာပါပြီ
မောင်ကျော်ထူးရေ မင်းကွန်မန်းလေးက ကောင်းတယ်ကွာ ညီအကိုရေး အဲလို စိတ်ဓာတ်မျိုးတွေများများမွေးပါ များများသာ ပြောပါ ဟုတ်လာ ။ ငါကလဲ ဗမာလူမျိုးတဦးပါပဲ ခေတ်အဆက်ဆက် ငါတို့လူမျိုးတွေရဲ့ စစ်ဝါဒ ကြီးနိုင်ငယ်ငြင်း ၀ါဒတွေ တဦးပေါ်တဦး ထားတဲ့ ကြီးမာတဲ့ မနာလိုမုန်းတီးမှုတွေ ဒီလိုစိတ်ဓာတ်တွေကြောင့်ပဲ မမြဲခြင်းသဘောရဲ့ သာဓကအဖြစ် တိုင်းတပါးကျွန်ဘ၀လဲရောက်ခဲ့ပြီးပြီ တိုင်းတပါးကျွန်ဖြစ်နေတုန်းကတောင် တို့နိုင်ငံ အတော်လေး နိုင်ငံတကာအလယ်မှာ လူရာဝင်ခဲ့ပါသေးတယ် အခု ကို့လူမျိုးရင်းတွေဖြစ်တဲ့ စစ်ကျွန်ဘ၀ကို ရောက်ခဲ့ရပြန်ပြီ စည်းကမ်းမရှိတဲ့ စစ်ကျွန်ဘ၀ရောက်တော့ လူမျိုးလဲပျက် နိုင်ငံလဲ ရစရာမရှိအောင် ဖြစ်နေရပြီမဟုတ်လား။ မင်းတို့ငါတို့ လို ကို့နိုင်ငံအရေးစိတ်ဝင်စားတဲ့ လူတွေ ကို့သမိုင်းကို ပြန်ဖတ်လို့ သင်ခန်းစာယူတတ်သင့်ပြီညီအကိုရေး။ ငါတို့ဗမာတွေဟာလဲ အကုန်လုံးကိုတော့ မဆိုလိုပါဘူး အကုန်လုံးနီးပါကတော့ဖြင့် အမှန်တရားဆို ကိုနဲ့မဆိုင်သလိုပဲ မျက်ကွယ်ပြုတတ်တယ် ကိုအမှုမပတ်ရင်ပြီးရော ဘယ်ကောင်ဘာဖြစ်ဖြစ် ငါတည်မြဲကောင်းစားဖို့ ပဲလိုတယ်ဆိုတဲ့ အကျင့်ဆိုးကြီးတွေကလဲ လူတိုင်းလိုလိုရှိတာ မညင်းနဲ့ဗျ။ ထားပါတော့ အလောင်းမင်းတရားတို့ တပင်ရွှေထီးတို့လက်ထပ်က အင်ပါယာတောင် ထူထောင်နိုင်ခဲ့ကျတဲ့ ဒါပေမဲ့ အဲဒီအင်ပါယာကြီးတွေက တည်မြဲသလား ...ကြီးနိုင်ငယ်ငြင်း ၀ါဒနဲ့ အုပ်ချုပ်နေမှတော့ နိုင်ငံကြီးတွေထူထောင်ခဲ့တဲ့ ဘုရင်အဆက်ဆက်တာ ကံကုန်သွားကျတယ် နိုင်ငံတော်ကြီး အမြဲငြိမ်းချမ်းမှု စည်ပင်ဝပျောမှုရှိခဲ့သလား ပုန်ကန်မှုတွေကို လူသူ လက်နက်အင်အားစုဆောင်းပြီး လယ်သမားအလုပ်သမားတွေ အလုပ်ပျက် အကိုင်ပျက် စစ်သားစုဆောင်းလို့ စစ်ထွက် ဘုရင်လက်ထပ်ကစလို အမြဲလိုလို ပုန်ကန်မှုတွေကို သွားရောက် နိမ်နိင်းခဲ့ရတယ်။ဒါကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ဗမာတို့ရဲ့ လက်နက်နိုင်ငံထူထောင်မှု စီမံကိန်းကြီးဟာ ခေတ်အဆက်ဆက်ဘယ်တော့မှ မအောင်မြင်ခဲ့ဘူးလို့ ပြောလို့ရတယ်။ ဒါဟာ စစ်ဝါဒနဲ့ လူမျိုးကြီးဝါဒကို ကျင့်သုံးပြီး ငါတာအမှန် ငါတာအဟုတ် ဆိုတဲ့ စိတ်ဓာတ်တွေကြောင့်သာ တိုင်းပြည်ဟာဘယ်တုန်းကမှ မငြိမ်းချမ်းခဲ့ဘူး အမြဲစည်းစည်းလုံးလုံးနဲ့ ဒီနိုင်ငံကြီးထဲမှာ အတူမနေနိုင်ခဲ့ကျတာပေါ့ မတိုးတက်ခဲ့တာလဲ ဒါကြောင့်ပဲ။ တရားမျှတစွာနဲ့ ကိုအနိုင်ရထားတဲ့ တိုင်းနိုင်ငံတွေအပေါ်မှာ ငြိမ်းချမ်းစွာပဲ စည်းရုံး အုပ်ချုပ်ကြည့်ပါလား ဒီနေ့ျြမန်မာနိုင်ငံ အင်္ဂလိပ်ကျွန်ဖြစ်စရာအကြောင်းလုံးဝမရှိဘူး။ မင်းကြည့်လိုက် စစ်တပ်ထဲမှာ ကချင်ရှိလား ရှမ်းရှိလား ကရင်ရှိလား မရှိဘူးငါ့ကောင် ဗမာစစ်တပ်ထဲမှာ ဗမာစစ်သားပဲရှိတယ် တိုင်းရင်းသား အပါမခံဘူး အုပ်ချုပ်ရေး မလွယ်ကူမှာဆိုးလို့ဆိုပြီးတော့ကာ အကြောင်းပြလို့ရတယ်။ဒီတော့ စစ်တပ်ယုတ်မာတာ ဗမာ ယုတ်မာတာပဲ စစ်တပ် မဟုတ်တာလုပ်တာ ဗမာ မဟုတ်တာလုပ်တာပဲဖြစ်သွားတာပေါ့ကွာ။ အခုခေတ် အယင်ခေတ်နဲ့မတူဘူး ငါ့ကောင် အရင်က လူတမျိုးနဲ့တမျိုး တွေးခေါ်ပုံခြင်းကွာပေမဲ့ အခုခေတ် နိုင်ငံတိုင်းလူမျိုးတိုင်းရဲ့ အတွေးအခေါ်တွေဟာ ဘာမှ ကွာဟမှုမရှိတော့ဘူး... အရင်လို ပြုမှုလို့မရတော့ဘူးကွ ဒီလို ဆက်ပြုမှုရင် ကို့လူမျိုးပဲ အရုံှးပေါ်မယ် ။ ရိုးသားတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေကိုလဲ အနိုင်ကျင့်မင်းမူအုပ်ချုပ်လို့မရတော့ဘူး အားလုံး စာတတ်ကုန်ပြီ ပညာတတ်ကုန်ပြီ ...ဒါကြောင့် ဒီနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့ ဘယ်လူမျိုးတိုင်းရင်းသားနဲ့မဆို သင့်အောင်ပေါင်းသင်းပြီးအတူတကွ နေမလား ...အရင်လို အနိုင်ကျင့်တဲ့ပုံဆံမျိုးနဲ့နေချင်သလား ကြိုက်တာရွေး အနိုင်ကျင့်ဗိုလ်ကျတာတွေဆက်လုပ်ချင်သေးရင်တော့ ခေတ်နဲ့လိုက်လျှော်ညီထွေမှုမရှိတဲ့အတွက် ဗိုလ်ကျချင်တဲ့ကောင်ကတော့ သူ့အလိုလို ဘေးရောက်သွားမှာပဲ ဘယ်သူတွေနဲ့မှ အရောတ၀င်နေလို့ရမှာမဟုတ်ဘူး ငြိမ်းချမ်းမှုလဲရမှာမဟုတ်ဘူး အမြဲလိပ်ပြာသန့်သန့်နဲ့လဲ ဒီမြေကြီးအပေါ်မှာ အသက်ရှင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး ။ ရလဒ်ကတော့ ပျက်စီးဆုံးရှုံးခြင်းဆိုတာကိုပဲ တသက်လုံးရင်ဝယ်ပိုက်လို့ လမ်းစပျောက်ရမှာပဲ ကို့လူရေး။
အော်ဒေါ်လာ ဒေါ်လာ တယ်လည်း တန်ဘိုးကြီးတာဘဲ
အိမ်ကြက်ချင်း ခွတ်ကြ ဘေးက ရန်တိုက်ပေးတဲ့ ဆရာကြီး
တွေကတော့ သေအောင် ခွတ်လေ ဖလားထဲ ငွေတွေ ဒေါ်လာတွေ
အထပ်လိုက်ဝင်လေ မကျမ်းကြေ Double Black ဆွဲလေ
ဆရာကြီးတွေ ဖြစ်ကုန်ရော ( စာရေးဆရာ ဝေ ဖန်ရေး ဆရာ
များသည် အတွေ့အကြူံ စုံရမည် မှတ်ချက် AIDS ထိဘူး
လျင် ပို၍ စုံသည် )
ကချင် ပြည်နယ်ငြိမ်းခြမ်းရေက ကာရကန် ရှင်တွေက အဒိကကြပါတယ် ဘေးကလူတွေကကူညီပေးယုံလောက်ဘဲ တတ်နိုင် မယ် တခု တော့ရှိတယ် နိုင်ငံ တခုမှာ လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့တဖွဲ့ဘဲ ရှိရပါမယ် ဒါမှလဲဒီမိုကရေစိ လမ်းစဉ် ကိုဖေါ်ဆောင် လို့ရပါမယ် တိုက်ခိုက် နေမယ်ဆို ရင်တော့မျော်မှန်း ထားတာလေး ဝေးနေအုံး မှပါ ဝမ်းနဲစရာပေါ့ သူတိုတွေအပ် တ တွေဘေးဖယ်င်္ပြီး ပြည်သူ့ မျက်နာ ကြည့်ဘို့လို တာပေါ့
အောင်ထူး(ရှေ့နေ)ရဲ့ဒီစာကို ကြိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီစာထက် ဒီစာကို ကွန်မန့်ပေးထားတဲ့ Pa Kyaing ရဲ့ သဘောထားနဲ့ အယူအဆကို ပိုကြိုက်တယ်။ ဒီအချိန်မှာ ဘာဖြစ်သင့်တယ်ဆိုတာကို မယိမ်းမယိုင် ပွိုင့်အောက်လုပ်နိုင်တဲ့ Pa Kyaingကို လေးစားတယ်။
Dear Our Leaders of Burma,
Now, we already watched and checked the Military Government (192-2012) work
forced and their trend, we found the country was going DOWN and DOWN again.
NLD leaders must make decision for PUBLIC and no need to wait for SPDC's turning down and must the EARLY APPROACH for Country and Public.
We also saw the 2002, DASSK was released and SPDC told to give the one of the POST for National Reconciliation post after that in 2003 May 30, they had tried to kill DASSK at DEPAEYIN.
So, their 2008 constition CHAPTER 3, and clause (Sa Lone) /59 was mentioned - to KICK OFF DASSK again by this law, so DASSK and NLD must aware of this LAW.
Please Dr. Lun and Our Leaders must remind to DASSK's future and we have patient more than 20 years.
DASSK alo make decision and must take this Political Role and NO NEED to afraid for the Burma otherwise, SPDC will kill again to Public and DASSK.
Please Dr. and our Leader take action.
ဆောင်း ပါး ရှင် အောင် ထူး ( ရှေ့ နေ ) ရေ
comment ဝင် ရေး တဲ့ pa kyaing ဆီ မှာ အ တွေး အ ခေါ် တွေမှန် အောင် သင် လိုက် ဦး
au tayna said...
Aung Htoo is thief he is not fair I'm never like him.
Pa Kying ပောပါတယ်၊ ဒေါ်စုကပဲ ရခိုင်အရေါ်၊ လက်ပံတောင်အရေး၊ ကချင်အရေးတွေပေါ်မှာ နစ်မျောနေလို့ ဖွဲ့စည်းပုံကို မပြင်နိုင်သလိုလိုကြီး၊ စားရယ်ရတယ်- ကလေးတောင်သိတဲ့ဟာကိုများဗျာ။
ဒေါ်စုက ရခိုင်အရေး လက်ပန်းတောင်းတောင်အရေး ကချင်အရေးတွေမှာ နစ်မျောမနေပါဘူး။အလေးအနက်တော့ထားပါတယ်။လူထုကသာမျောပါသွားတာပါ။ဘာကြောင့်ကျွန်တော်ပြောနိုင်သလည်းဆိုရင် နတ်မောက်မြို့မှာလူထုတွေနဲ့တွေ့ဆုံတယ်။ တနင်္သာရီတိုင်းကိုခရီးထွက်တယ်။ပညာရေးရံပုံရေရှာဖွေပွဲတွေလုပ်တယ်။ပြည်တွင်းပြည်ပပညာရှင်တွေနဲ့လည်းတွေ့ဆုံမူ့တွေလုပ်တယ်။သူလုပ်ရမဲ့အလုပ်ကိုတိတိကျကျနှင့်အချိန်ကိုအကြိုးရှိရှိအသုံးချနေပါတယ်။ဒေါ်စုဖွဲံစည်းပုံကိုပြင်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည့်ပပါတယ်။အခြေအနေနှင့်အချိန်အခါကို ကြည့်ပြီး နားလည်ပေးဖို့သာလိုပါတယ်။ ကျွန်တော်ဆိုလိုတာက ဖွဲ့စည်းပုံဟာ ပြည်သူလူထုနှင့်တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်ပါတယ်။ ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဖို့အတွက် ဖွဲ့စည်းပုံကိုအာယုံစိုက်ရပါမယ်။ ဖွဲ့စည်းပုံပါ ဥပဒေအကြောင်းအရာတွေကို လေ့လာကြရပါမယ်။ ပြီးတော့ဘုံသဘောတူညီချက်တွေချမုက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ကောင်းတဲ့အချက်တွေကိုသွားပြင်မိရင်လူထုအတွက်အရမ်းနစ်နာပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့မရေးတော့ပါဘူး။ဥပမာဗျာ ကာလုံဖျက်သိမ်းရေးတို့အရေးလို့အော်ကြတယ်။ကာလုံကိုဘယ်လိုဖျက်သိမ်းမလည်း ကျွန်တော်နားလည်သလောက်ပြောရရင်နိင်ငံတစ်နိုင်ငံမှာလုံခြုံရေးကောင်စီဆိုတာ အခြေခံဥပဒေအရ ဖွဲ့စည်းလေ့ရှိကြပါတယ်။ အမျိုးသားကာကွယ်ရေးနှင့် လုံခြုံရေးကောင်စီလို့ဘဲခေါ် ခေါ် နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးကောင်စီလို့ဘဲခေါ်ခေါ် ကိုယ့်နိုင်ငံကို တိုင်းတစ်ပါးက ၀င်ရောက်ကျးကျော်လာရင် ခုခံကာကွယ်နိုင်အောင်လို့ပါ။ ကာလုံဖွဲ့စည်းပုံကိုကြည့်ရင် သမ္မတနှင့် ဒုသမ္မတ (၂)ဦး ကာကွယ်ရေး၊နိုင်ငံခြားရေး၊ပြည်ထဲရေး၊နယ်စပ်ရေး၊ဆိုတဲ့ဝန်ကြီး(၄)ဦး ပြည်သူ့လွှတ်တော်နှင့် အမျိူးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဌ (၂)ဦး ပနှင့်ဒု တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(၂)ဦး ပေါင်း (၁၁)ဦးနှင့် ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။အဲဒီအထဲမှာ key person ကနိုင်ငံတော်သမ္မတဖြစ်ပါတယ်။ ကာကွယ်ရေးဦးစည်းချှုပ်(၂)ဦးကို ပုဒ်မ ၂၀၈ အရ သမ္မတ က တိုက်ရှိုက်ဖြုတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ ဒုသမ္မတ (၂)ဦးနှင့် ၀န်ကြီး၎ဦးကို သမ္မတက အဆိုတင်သွင်းမှ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်က အတည်ပြု ပေးနိုင်ပါတယ်။ သမ္မတ ကစားလို့မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် တွေကအမျိးသားလွှတ်တော်နှင့် ပြည်သူ့လွတ်တော် ဥက္ကဌတွေပါ။ ဒါကြောင့် သမ္မတက သာအဓိက ပုဂ္ဂိုလ် ဖြစ်ပါတယ်။ ကာလုံဖြက်သိမ်းရေးလို့အော်နေမဲ့အစား ပြည်သူ့ဘက်က မားမားမတ်မတ် ရပ်တည်မဲ့ပြည်သူ့သမ္မတ ရနိုင်ခဲ့ရင် ကိစ္စပျက်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်းဒေါ်စုက လူထုအကြိုးကိုလုပ်နိင်အောင် သမ္မတ ဖြစ်လိုတယ်လို့ပြောခဲ့တာပါ။တစ်ကယ်လို့ဒေါ်စု တာ သမ္မတ ဖြစ်နိုင်ခဲ့ရင်တော့ သားရွေအိုးထမ်းလာတာကိုမြင်ရမယ့်ကိန်းပါဘဲ။ ဒေါ်စုသမ္မတ ဖြစ်ဖို့ ကန့်သန့်ထားတဲ့အခြေခံဥပဒေက ၅၉ (စ)ပါ။အဲ့ဒါကို ပြင်လိုက်ရင်ဖြစ်ပါတယ်။ ၅၉ (စ)ကိုတောင် အကုန်လုံးပြင်စရာ မလိုပါဘူး။သားသမီးတော်စပ်သူ၏ ဇနီး၊ခင်ပွန်းတို့သည် နိုင်ငံခြားသား ခံယူသူ မဖြစ်စေရဆိုတဲ့ အချက်ကလေးပါဘဲ။ဖွဲ့ စည်းပုံ မပြင်နိုင်ရင်တောင် လုပ်လို့ရတဲ့နည်းလမ်းတွေ ရှိပါသေးတယ်။ကျွန်တော် အဓိကပြောချင်တာက စစ်တပ်ကိုလူထုကတိုက်ရိုက်ချုပ်ကိုင်လို့ မရပါဘူး။သမ္မတကသာ ချုပ်ကိုင်လို့ ရတာပါ။သမ္မတကိုလူထုကသာ ချုပ်ကိုင်လို့ ရတာပါ။နိုင်ငံတစ်ကာမှလည်းဒီလိုဘဲလုပ်နေကြတာဘဲ မြန်မာပြည်ရဲ့ ဖွဲ့ စည်းပုံကိုကြည့်ရင်လည်း သမ္မတကိုအာဏာ အပြည့်အ၀ပေးထားတဲ့ သမ္မတစစ်စစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။
Pa kyaing မဆဲမဆိုပဲ ပြောပြတဲ့အတွက် Comment
အကို PA KYAINGကိုတော့ဗျာ တော်တော်လေးကို ကျွန်တော်လေးစားပါ သူလိုလူတွေနိုင်ငံအတွက်အများကြီးလိုအပ်ပါတယ် လေးနက်တဲ့အတွေးအခေါ်ပညာရှင်တစ်ယောက်လို့ တင်စားပြောချင်ပါတယ်.............ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျား အကိုPA KYAING
U Aung Htoo,
DASSK clearly spoken, you can review all her speechs.
She needs to get authority of Myanmar asaPresident to manage fully. Now these U Thein Sein government still stupid as everybody can see, even children understood. Honestly, our people desire that we would like to getatrue leader DASSK.
2008 Constitution was created / amended after 1988 revolution. That was purposely creation of Military Groups that not from People. Meanwhile, Ex. G Than Shwe betrayed some additional fact like Foreigner or married with foreigner in the family. He and his team did not let country people know about it. Meantime, the additional one can be automatically disregard.
You should point out/ highlight to write to amend the 2008 Constitution first.
Every single topics that you did not show what the recent government what they should do. We encourage "You should have to highlight ..... cos they are still taking money from the country and people, they are people servants otherwise current government servants.
commentရေးတဲ့သူနဲ့ထောက်ခံတဲ့သူနဲ့စုံလို့ပါဘဲcommentအားလုံးကိုဖတ်းကြည့်တော့သူရဲကောင်းစနစ်ကိုပိုပြီးထောက်ခံကြတယ်မြန်မာနိင်ငံမှာသူရဲကောင်းစနစ်ခေတ်မကုန်သေးဘူးဆိုဒါပဲအနှစ်ချုပ်သိလိုက်ရပါတယ်လူဦးရေသန်းခြောက်ဆယ်ကျော်မှာလူထုခေါင်းဆောင်နောက်တစ်ယောက်မရှိနိင်ဘူးဆိုတဲ့သဘောဆောင်ခြင်းအပေါ်မှာလည်းမြန်မာလူမျိုးများရဲ့အရေအချင်းကိုလည်းအံသြမိပါတယ်အခုလူထုရဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးမရှိတော့ရင်မြန်မာနိင်ငံရဲ့ရှေ့ရေးဟာမတွေးဝံစရာဘဲပေါ့နော် ဟင်း လို့ဘဲညည်လိုက်တော့မယ်
သူရဲကောင်းကိုးကွယ်တဲ့အကျင့်ကဖျောက်နိုင်ခဲတယ်ကွ ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ်ကသူရဲကောင်းလောက်လည်း မ စွမ်းဆောင်နိုင် တော့လုပ်နိုင်သူကို အားကိုးတာမဆနိးပါဘူး။ဒါပေမယ့် လုပ်တာကိုင်တာ အချိုးမပြေရင် အပြစ်တင်ဖို့လည်း မနှေးစေနဲ့ဟေ့။
pa kyaing ရဲ့ second comment ကို reply လုပ်ထားတဲ့ငါ့ comment ကို ဘာလို့  delete n reject လုပ်လိုက်တာလဲ။ပြန်တင်ပါ မင်းတို့ အစိုးရကြီးပဲပြောပြီး မင်းတို့ကိုယ်တိုင်က အဆဲတစ်ခွန်းမှမပါတဲ့ comment ကို ဖျက်ပစ်တာ မင်းတို့ကိုယ်တိုင်က စာပေကင်ပေတိုင် လုပ်နေတာပဲ bullshit
စာသေသေချာချာဖတ်ပြီးမှ တူတဲ့comment ကိုဖျက်ကွ တူပေမယ့် reply ပါတဲ့comment မတူရင်မဖျက်နဲ့လေကွာ။အဲလောက်တောင်ပစ်စခတ်နဲ့ ပြီးပြီးရော မလုပ်နဲ့ကွ။အပျော်လုပ်နေရင်မပြောပါဘူး။အများအကြိုက်လုပ်စားနေတယ်ဆိုမပြောတော့ဘူးကွာ
ပုဂ္ဂိုံလ်စွဲ၊ပါတီစွဲ၊မရှိပါ။ဖြစ်သင့်တာလက်တွေ့ကျတာကိုဘဲစဉ်းစားရမှာပါ။ ရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေထဲက အကောင်းဆုံးလို့ယူစရတဲ့ တစ်ယောက်ကိုတော့မဖြစ်မနေရွေးချွယ်ရမှာပါ။ သူချမှတ်ထားတဲ့မူဝါဒကိုလက်ခံပြီးစည်းစည်းလုံးလုံး ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ လက်တွဲဆောင်ရွက်ကြရမှာပါ။ လက်နှက်ကိုင်တော်လှန်ရေးက နှစ်၅၀ကျော်ခဲံပြီး လူထုတွေလမ်းပေါ်ထွက်တာလည်း အကြိမ်ကြိမ်မနည်းတော့ဘူး။ စစ်အာဏာရှင်တွေကိုတော်လှန်တဲ့နေရာမှာ မအောင်မြင်ရတဲ့အဓိကအကြောင်းတရားက အတိုက်အခံတွေမညီညွတ်ကြတဲ့ပြသနာပါ။ ကျွန်တော့်အမြင်ဘယ်နည်းစနစ်ကိုဘဲရွေးချယ်ရွေးချယ်စည်းလုံးညီညွတ်ရင်ဖြစ်ပါတယ်။ အခုအနေအထားအရ အတိုက်အခံတွေဘက်ကလည်းနောက်ကြောင်းပြန်လှည့်လို့ မသင့်တော့ဘူးလို့ထင်ပါတယ်။အောင်မြင်တာမအောင်မြင်တာထက်ငါတို့ရွေးချယ်တဲ့လမ်းမှန်ခဲ့ရင်လည်းအတူတူစံကြမယ်။မှားခဲံရင်လည်း မျှဝေပြီးခံစားကြမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓတ်မျိးမွေးမြူပြီးတက်ညီလက်ညီလုပ်ကြရင်အောင်မြင်မှာပါ။တစ်ကယ်လို့ သမ္မတဦးသိန်းစိန်ကလည်း ပြည်သူဘက်ကပြက်ပြက်သားသားရပ်တည်ပြီးအပြောင်းအလည်းလုပ်မယ်ဆိုရင် နိုင်ငံတစ်ကာကရောပြည်သူလူတုကပါ လက်ကမ်းကြိုဆိုကြမှာပါ။လက်ရှိမြင်တွေ့နေရတာကတော့ လူတုတွေလမ်းပေါ်ထွက်လို့ဥပဒေချိုးဖောက်ရင်လက်သံပြောင်ပြောင်နှင့်ဥပဒေအရအရေးယူခဲ့ပြီးအုပ်ချှပ်ရေးအာဏာပိုင်တွေ ဥပဒေချိးဖောက်မှုတွေကြတော့အရေးမယူဘဲ အတွင်ကူးပြောင်းရေးကာလမို့ ဒါမျိးတွေကတော့ရှိနေအုန်းမှာပါဘဲ။ရုတ်တရက်ကြီးပြင်ဖို့်ခက်ပါတယ်တဲ့။
ဖြစ်သင့်တာတွေ လက်တွေ့ကျတာတွေ လုပ်သင့်တာတွေ လုပ်ပေးခဲ့ပြီးလို့ လွှတ်တော်ထဲလည်း ဝင်ပြိုင်တဲ့နေရာတွေမှာနိုင်ပြီး အုံနဲ့ကျင်းနဲ့ အထဲရောက်သွားပြီ။(မဲဆန္ဒနယ် ရှိသလောက် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာ ) ခရီးဘယ်လောက်ပေါက်အောင်သွားသလဲဆိုတာ တင်သွင်းတဲ့အဆိုကြည့်တော့ ဒီအဆိုတစ်ခုတင်ဖို့ တော်တော်အချိန်ပေးရသလို ရှာမှရှား။
သြော်တိုင်းပြည်အတွက်တောက်လျှောက်လုပ်ခဲ့တဲ့ လူတွေ အချိန်တွေရတုံးမလေ့လာထားပဲအခွင့်အရေးရတော့ ဘာလုပ်မယ်ညာလုပ်မယ်ကြိုတင်စီစဉ်ပြီးပြင်ဆင်ထားမှုမှမရှိဘဲ။လက်ပူတိုက်ပြီးလွှတ်တော်တက်ရင်တော့ အကောင်းဆုံးတွေရလာမှာမဟုတ်ပဲ ပြင်ရင်းစမ်းကြည့် အဆင်မပြေထပ်ပြင် ထပ်စမ်းနဲ့နောက်ထပ်တစ်မျိုးဆက်တော့နာဦးမယ်။ အသွင်ကူးပြောင်းဆဲမို့လို့ ထိထိရောက်ရောက်မလုပ်နိုင်ဘူး အချိန်ယူရအုံးမယ်လို့ ဒါပေမယ့်အာဏာကိုထိပါးလာရင်လက်မနှေးတဲ့ လူမိုက်ကြီးဟောင်း (ခွေးမြီးကောက်ကျည်တောက်စွပ်ရင်လည်းစွပ်မှာပါ )က ဒီလောက်လုပ်ပေးနိုင်ရင်လည်း ဝိုင်းပြီးတည့်မတ်ညာသံပေးကြရင် အကောင်းဆုံးမဟုတ်တာတောင် လက်ခံလို့ရတဲ့အဆင့်လေးတစ်ခုတော့ရမှာပါ။လုပ်ဟေ့ဆိုတော့ ဘယ်ကစလို့ ဘာစလုပ်ရမယ်ဆိုတာမသေချာ၊အပြနိအလှနိထိန်းကျောင်းဖို့အတွက်ကြတော့ ကိုယ်ခံအားကနည်း ၊အကောင်းဆုံးအတိုက်အခံအဖြစ် လက်ရှိသမ္မတ ကိုပံ့ပိုးပေးဖို့မစဉ်းစားဘဲ ၊သမ္မတ နေရာမျှော်ပြီးငါသာဆိုဒီထက်ကောင်းအောင်လုပ်ပေးမယ်ထင်ပြီး လက်ရှိ အရှိန်အဝါ နဲ့လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်ပြောသင့်ပြောထိုက်တဲ့စကား တွေကိုကျတော့ရဲရဲဝံ့ဝံ့ပြောမထွက်ဘူး။
အားလုံး ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆွေးနွေးကြသူများ လေးစားပါတယ်
အလွယ်ဆုံးကတော့ မင်းကြီး ရန်နောင်ေ
အခြေခံ ဥဗဒေ ပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးရန်
တိုင်းရင်းသား နယ်ခြားစောင့်တပ် အားလုံး ဖွဲ့စည်းပေး
အမှန်တကယ် ကုန်ပစ္စည်း စစ်အဖွဲ့ ခေတ်မှီ စစ်ပေး
လဘ်ယူသူ ထောင်ဒဏ် ၁၅ နှစ် သတ်မှတ်ရန်
မဒိန်းမှု့ လူမျိုးကွဲ ဘာသာကွဲ သေဒဏ် ပေးရန်
မိမိနိုင်ငံ ကာကွယ်ရေး မိမိဘာသာ ဆုံးဖြတ် ကာကွယ်ရန်
ခေတ်အမှီ ဆုံးလက်နက်များ ဝယ်ယူသင့်
ကျုးကျော် ခွင့်ပြုချက်မဲ့ သေဒဏ်ပေးရန်
အမေရိကန် စစ်စခန်း ဆောက်ခွင့်ပြုရန်
အားလုံးခင်ပါတယ် ရင်ထဲမှာ အကြိတ်အခဲများလာလို့ပါ
ခလေးဆန် သွားရင် နားလည်ပေးပါ
ဥဗဒေတွေက မြန်မာ တိုင်းရင်းသားတွေကိုသာ
ကိုယ်နိုင်ငံ ပဲ့မသွားအောင် မဆောင်ရွက်ရဲဘူးလား
အားမရဘူးဗျာ အချိုန်ကိုက် မငြိမ်းချမ်းအောင်
၈၈မြအေး လိုက်လုပ်နေတယ် ၈၈မြအေးထွက်ပေးပါ
သိန်းစိန်အစိုးရ ဘာကြောင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲ လုပ်သလဲ ---
(၁) UNFC ရဲ့ ပြည်ထောင်စု တပ်မတော် ဖွဲ့စည်းရေး အကောင်အထည် ပေါ်လာမှာ ကြောက်လို့ ဖြစ်တယ်။
(၂) ပြည်ထောင်စု တပ်မတော်ဖွဲ့လို့ နိုင်ငံတကာ အသိအမှတ်ပြုရင်၊ ပြည်သူက ထောက်ခံလာပြီဆိုရင်၊ ပြည်တွင်းထဲက တပ်တွေပါ ပူးပေါင်လာပြီဆိုရင်၊ အာဏာရှင် စနစ် ပျက်စီးမှာမို့ ဖြစ်တယ်။
UNFC လုပ်သင့်တဲ့ လုပ်ငန်းတွေက
(၁) UNFC အနေနဲ့ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်တုန်းက မဟာမိတ်တပ်တွေနဲ့ အတူ ဖက်ဆစ်စနစ်ကို တိုက်ဖျက်ပေးခဲ့ဖူးတဲ့ သမိုင်းကို ပြန်လည် တူးဖော်ပြီး သမိုင်းကို အသက်သွင်းရမယ်။
(၂) မဟာမိတ်တပ်တွေ (အမေရိကန်၊ အင်္ဂလန်၊ ရုရှ စတဲ့ နိုင်ငံတကာတပ်တွေ) ရဲ့ ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးမှာ ပါဝင်ကူညီခဲ့ဖူးတဲ့ သူတွေဟာ ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေးတွေ တောင်းခွင့်ရှိတယ်။
(၃) ၁၉၄၈ လွတ်လပ်ရေးရပြီးတော့ ဗမာတွေ လွတ်လပ်ရေးရခဲ့တယ်။ တိုင်းရင်းသားတွေ ကိုလိုနီဖြစ်နေဆဲဖြစ်တယ်။ မဟာမိတ်တပ်မတော်တွေ တိုင်းရင်းသားတွေအတွက် အကြွေးမကျေသေးဘူး။ လူ့အခွင့်အရေးကို ထောက်ပြ၊ သူတို့ပေးခဲ့တဲ့ ကတိကို ထောက်ပြပြီး UN မှာ ကမ္ဘာသိ တောင်းဆိုကြရမယ်။
ဒါမှဒီကောင်တွေ ကိုယ့ဟာကို ခွေးဖြစ်နေတာ
ကောင်းပြီလူလေးတို့ မင်းတို့က ကိုယ်ဖြစ် ချင် တာကို တွေးပြီး အပြစ်တင် မ စောရဘူးကွ ။ လူ တစ် ရာမှာ ကိုးဆယ်က လက်မခံ ရင် မင်းဘာ ပြောမလဲ ။ ယ နေ့ အီဂျစ်အ ခြေ အ နေ ဘယ် လို ဖြစ်နေလဲ သိလား အဲဒါကို ရော မင်းတို့ ဘယ်လို ပြောမ လဲ ။ ငါ့ သားတို့ မင်းတို့ ဆက်ပြီး လေလာဖို့ လိုသေးတယ်။
အလွန်ကောင်းတဲ့ COMMENT ပါ ။ ထောက်ခံ ပါသည်။
ကိုယ်ရေးတဲ့စာက ကိုယ့် အဆင့်အတန်းကို ဖော်ပြ နေတယ် ။ ညီလေး ရဲ့ အ ရေးတွေ က တိုင်းနိုင် ငံ အ ရေးကို ဆွေးနွေး ဖို့ မမှီ သေးပါ ။ သို့ပေမဲ့ နိုင် ငံ ရေး စိတ်ဝင် စားတာက တော့ တော်ပါတယ် ။ နိုင် ငံ ရေးဆိုတာ ပရဟိတ အလုပ်ပါ ။ ပရဟိတ လုပ်မယ်ဆို ရင် အပြု သ ဘော စ်ိတ် ကို အရင် မွေးမြူ ရပါ မယ် ။